Archive du 20171102
Honoré Rakotomanana Notrongisin’ny HVM
Niseho ny efa nampoizina amin’ny kajikajin’ny fanjakana HVM nanalana an’i Honoré Rakotomanana sy ny nametrahana an’i Rivo Rakotovao ho filohan’ny antenimierandoholona.
Komitin’ny fampihavanam-pirenena Nihaona tamin’ny filoham-pirenena
Noraisin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ny talata teo ireo ben’ny tanàna miisa 40 avy any amin’ny faritry Sofia.
Rajaonarimampianina Nandeha an-tsokosoko tany Afrika Atsimo
Tsy nisy fampandrenesana, tsy nisy fampitam-baovao ofisialy fa dia efa ny sary nivoaka no nahafantarana fa hay any Afrika Atsimo ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Andry Rajoelina Eo am-pelatanan-dRajaonarimampianina ny ainy
Mitombo sy miseho hatrany ny lamba maloton’ny fanjakana tetezamita notarihin’i Andry Rajoelina, indrindra fa taorian’ny raharaha famarotana ny tany misy ny Villa Elizabeth, nonenan’ny filoha teo aloha Pr Zafy Albert. Miezaka manadio tena kosa ireo olon’ny HAT,
Fifidianana an’i Rivo Rakotovao Amboletra sady petatoko
Tsy nisy ny fivoriambe nandinihana sy nanapahana fa hatao ny fifidianana ny filohan’ny antenimierandoholona ary tsy voahaja ihany koa ny fe-potoana kely indrindra hahafahana mandrotsaka ny filatsahan-kofidiana, izay adiny iray farafahakeliny.
Fiatrehana ny fifidianana Ny governemanta no mamoa-doza
Mbola manjavozavo tanteraka ny momba ny fifidianana ankehitriny na eo aza ny ezaky ny vaomiera mahaleotena na CENI.
Raha mba ..
Raha mba ny vita Sinoa re no akatona ? Amin'izay ny vita Malagasy mba hisongadina. Ary raha ny vita karàna indray no manjavona ? Ireo mpandraharaha Malagasy mba higalabona.
Famarotana ny villa Elisabeth Tsy ho afa-bela i Reboza Julien
Amin’ny maha filohan’ny vaomiera mpanadihady mikasika ny olana momba ny fananantany eny anivon’ny antenimieram-pirenena azy dia nanazava ny depiote Naivo Raholdina fa fahefan’ny minisitry ny fanajariana ny tany tamin’ny fotoan’andro, izany hoe,
Grand Chancelier Ralitera Etienne Matin’ny aretim-po
Nodimandry afak’omaly talata teo amin'ny faha-79 taonany ny Grand Chancelier Ralitera Etienne, izay tsy zoviana amin'ny maro intsony ; Grand Chancelier de l'Ordre National de Madagascar, Grand Croix de Première Classe izy ,
Fanadiovana faobe manerana ny nosy Haingo dison’Iarivo, hoy ny CRAM
« Haingo dison’Iarivo » ny andro iray fanadiovana an’i Madagasikara, hoy ny avy eo anivon’ny CRAM na ilay sehatra misaina ny ho avin’i Madagasikara.
“Boulangerie” nirehitra Saika potika ny manodidina azy
Nitrangana hai-trano indray tao Antsirabe ny tolakandron’ny talata 31 oktobra lasa teo. Toeram-panaova-mofo iray miorina tsy lavitry ny tobin-dasantsy eo Antsenakely no nisian’ny afo
Tsena Petite Vitesse Hiroso amin’ny fanamboarana azy ny CUA
Niatrika fivoriana tsy ara-potoana ny Mpanolontsain’ny Tananan’Antananarivo Renivohitra nanomboka ny alatsinainy sy ny talata lasa teo.
Gare routière Vatofotsy Antsirabe Kaoperativa 23 no tsy mankasitraka ny fizarana azy
Nanao fangatahana tamin’ny tompon’andraikitra mahefa amin’ny hanatsarana ny toby fiantsonana zotram-pitaterana rezionaly ao Vatofotsy Antsirabe ireo kaoperativa manatanteraka asa amin’ity “ligne”
Fetin’ny olo-masina Nety ny tsena ho an’ireo mpivarotra voninkazo
Na dia anisan’ireo fomba efa tranainy indrindra nahazatra aza ny fanateram-boninkazo eny amin’ny fasana rehefa fetin’ny olo-masina ny 1 novambra, mbola maro ireo nanatanteraka izany omaly.
Nampangain’ny teniny sahady
Fandresena ara-demokratika ny fifidianana ary tsy tokony hatahotra intsony isika Malagasy.
Fitaterana an-tanàn-dehibe Hatsaraintsika io , hoy i Dada
Mandeha araka ny tokony ho izy ny fanatsarana ny tontolon’ny fiarakaretsaka eto Antananarivo.
Orinasa MICTSL -Toamasina Nanolotra fitaovana sy fanafody ho fanadiovana ny tanàna
Ny talata teo no nanolotra ny fanampiany faharoa ho an’ny komitin’ny pesta ao Toamasina ny orinasa MICTSL;
AAA-Tiko Andranomanelatra Miantso ny filoham-pirenena hanokatra ny orinasa ireo mpiasa
Nihetsika indray ny mpiasan’ny AAA-Tiko Andranomanelatra ny talata 31 oktobra lasa teo, tao amin’ny ozinina Andranomanelatra ary mihamafana ihany ny fitakian’ireo mpiasan’ny AAA-Tiko